Welding Wire Vagadziri - China Welding Wire Suppliers & Factory
Standard: GB ER50-6 AWS ER70S-6 JIS YGW12 Unhu: ER70S-6 ndeyemhangura yakaderedzwa yakaderera alloy simbi gasi rakavharidzirwa waya yekudzvanya, waya ichitakurirwa inoitwa pasi pe CO2 kana Argon-hupfumi gasi rakavharwa. Iyo ine yakanaka weldability; yakagadzikana arc, isingasviki spatter, yakanaka weld kutaridzika, kushoma weld pore kunzwa; zvakanaka zvese-chinzvimbo weldability, yakagadzika welding yazvino ranga. Chishandiso: Inokodzera kune imwe kana akawanda welding welding yekabhoni simbi uye yakaderera alloy simbi ine simba grade ye500MPa (semuenzaniso iyo ...